Ụlọ nkwari akụ Dunchurch na -emechi n'otu abalị: Enweghị ekwentị, ọ nweghị weebụsaịtị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Ụlọ nkwari akụ Dunchurch na -emechi n'otu abalị: Enweghị ekwentị, ọ nweghị weebụsaịtị
Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ụlọ nkwari akụ Dunchurch
Ụlọ oriri na ọchụ Dunụ Dunchurch Park dị na Dunchurch, nnukwu obodo na parish obodo na ndịda ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Rugby na Warwickshire, England, akagbuola ezumike abalị niile, agbamakwụkwọ na ihe omume na -aga n'ihu.
N'abalị, emechiela ekwentị ekwentị ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ, yabụ na onweghị ụzọ ị ga -esi agwa ụlọ nkwari akụ ahụ okwu ma ọ bụ onye ọbịa ma ọ bụ mgbasa ozi.
Ewepula weebụsaịtị webụsaịtị - ọ pụọla; enweghị ozi ikpeazụ ma ọ bụ nkọwa maka ndị ọbịa ma ọ bụ ọha.
Ụlọ nkwari akụ ahụ enyebeghị nkwupụta ọ bụla na -akọwa mmechi ngwa ngwa a ma ọ bụ ihe kpatara ya.
Ụlọ nkwari akụ Dunchurch Park niile ekwenyela na ọ ka na -arụ ọrụ yana na ọ banyeghị na nnabata ma ọ bụ nchịkwa.
Onye na -ekwuchitere okwu weere na mgbasa ozi mmekọrịta na mbido izu a wee kwuo, sị: “Site na ozugbo, ụlọ nkwari akụ Dunchurch anaghịzi emeghe ọha, ma ọ bụ nwee ike ịkwado agbamakwụkwọ ma ọ bụ ihe omume. Agbanyeghị, anyị na -arụ ọrụ n'oge a ma nwee ike ịkọwa na anyị anọghị na nnabata ma ọ bụ nchịkwa.
“Ka ọ dị ugbu a, anyị na -arịọ mgbaghara n'ezie maka mgbaka nke a ga -ebute; nchegbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ gbasara mmetụta mmechi anyị kwesịrị izigara ya ozi [email protected] ebe onye otu anyị ga -enwe obi ụtọ ịkpọtụrụ gị site na nloghachi. ”
A na -ezigara otu ozi ahụ na Akaụntụ Dunchurch Park Hotel na facebook. Ọ dị ka ezitere ya na 2:05 ụtụtụ. N'okpuru nkwupụta edere, ụlọ nkwari akụ ahụ ekepụtala ọkwa ya: “Dunchurch Park Hotel nwere oke nwere ike ịza ajụjụ na post a,” nke mmadụ nwere ike ịpụta, na ha achọghị ịzaghachi onye ọ bụla.
na England Ibe facebook nke ụlọ nkwari akụ, enwere arịrịọ sitere na onye ntinye akwụkwọ agbamakwụkwọ na -enweghị olileanya:
"Nnọọ????? Kedu ihe kpatara na onweghị onye na -agwa anyị ndị na -ede akwụkwọ agbamakwụkwọ ọ bụla ???? Cmon dunchurch. Bilie gwa anyị ihe na -eme. ”
Asịrị na -aga nso mmechi ozugbo bụ ka otu onye zara: “Agwara m na ha ewerela ọtụtụ ndị gbara ọsọ ndụ n'onyinye gọọmentị, nke a sitere n'aka onye ọrụ. Ha na gọọmentị nwere nkwekọrịta ọnwa iri na abụọ maka ndị gbara ọsọ ndụ. "
Nkwupụta ụlọ nkwari akụ ahụ kwuru na ekwesịrị izipu ajụjụ ka onye otu ha "nwee obi ụtọ ịkpọtụrụ gị site na nloghachi," ezighi ezi. Otu onye ọrụ facebook jụrụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla enwetala azịza ọ bụla na ozi ekwentị ma ọ bụ ozi ịntanetị, na -ede, sị: "Nwara ịkpọ oku na izipu ozi ọzọ taa - ọ nweghịkwa ihe ọ bụla - ọ nwere onye nwere ihe ịga nke ọma na họtel ahụ?"
Nzaghachi ọ bụla enwetaghị azịza ọ bụla na otu azịza bụ: “Ọ dịghị chi ọma anyị. Anyị ezipụla ozi email, kpọọ ahịrị ọ bụla enwere ike, anyị nwara onye nhazi anyị na enweghị nzaghachi ma ọ bụ mmelite. … Anaghị m enwe olile anya maka mmelite ruo izu na -abịa. Ọ bụrụ na ọ gbasara agbamakwụkwọ, m ga -akpọtụrụ ụfọdụ ndị na -ebubata Dunchurch, ebe m jisiri ike nweta ozi na nkwado karịa ka m nwere ebe mgbakọ ma ọ bụ ndị ọrụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ! ”
Ihe omimi ha gara n'ihu.
martin marshall ekwu, sị:
September 5, 2021 na 10: 51
Ndewo, anyị nọ ebe a n'ịgba ịnyịnya nzuzu achọpụtara site n'akwụkwọ ihu na anyị akagbuola akwụkwọ agbamakwụkwọ anyị niile. Anyị na DP nọrọ afọ 8 na otu a ka ha si emeso onye ọ bụla adịghị enwe obi ụtọ. Anyị bịara ebe a iji nyere ndị otu niile aka ịkwaga ebe ọzọ n'ihi na e nwere ụbọchị pụrụ iche